စတိဗ်ဂျော့စ်၏သီးသန့်ဗီဒီယိုကသူ၏နူးညံ့သောဘက်ကိုပြသသည် ငါက Mac ပါ
Apple အမှုဆောင်အရာရှိတွေကရုပ်ရှင်တွေကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုတာကတော့လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး စတိဗ်ဂျော့ဘ်အဟောင်းနှင့်အသစ်နှစ် ဦး စလုံး။ နောက်ဆုံးဥပမာကတော့ Steve Jobs ရဲ့မုဆိုးမပဲ။ Lauren Powell Jobs သည်နောက်ဇီဝရုပ်ပုံကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသည် Sony Pictures မှ (Wall Street ဂျာနယ်၏အဆိုအရသူသည်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Aaron Sorkin နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်) ။
မတော်တဆသို့မဟုတ်မ ABC News သည်စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏သီးသန့်ဗီဒီယိုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် နှင့် အရင်ကမမြင်ဖူးတဲ့မြင်ကွင်းများ Apple ကိုတည်ထောင်သူမှ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် iPhone ကိုမဖွင့်ခင်တစ်ရက်အလိုတွင် Apple အမှုဆောင်အရာရှိများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ Apple ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူရဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဘက်, သူကိုဆန့်ကျင်သည်သူ၏ရှည်လျားသောစစ်တိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြcomplနာများအရှုံးသမား ပန်ကရိယကင်ဆာ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် iPhone 5s ပြောပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် Steve Jobs ၏သီးသန့်ဗီဒီယို.
ABC ကုမ္ပဏီကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသူ့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းများအတွက်မနေ့က၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဂျော့ဘ်သေခြင်း၏ ၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အောက်တိုဘာ ၅ ရက် ၂၀၁၁ တွင်အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်၏ဝန်းကျင်ဇာတ်ကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သည်။ ရက်စက်သောစီးပွားရေးသမား Que သူတို့ကမိသားစုကိုတန်ဖိုးမထားဘူး o သူသည်မိမိအန်ထမ်းများလေးစားပါဘူးs.
မျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးသည်သူနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးများဖြင့်တွေးနေမည်၊ အကယ်၍ သူကအနုတ်လက္ခဏာဖြင့်ပြသည့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါကသူသည်သက်တမ်းကြာ Apple ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဂျော့ဘ်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Bill Street မှ Wall Street ဂျာနယ်သို့သွားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » စတိဗ်ဂျော့စ်၏သီးသန့်ဗီဒီယိုကသူ၏နူးညံ့သောဘက်ကိုပြသည်
အဲဒါကို ... ဖြစ်ကောင်း ... #grandestevejobs လေးစားဖို့ဇာတ်ကောင်
Robert Wayne ကိုပြန်ပြောပါ
၂၁.၅ လက်မအရွယ် iKac 21,5k resolution ဖြင့်လာမည့်အပတ်တွင်ရောက်ရှိမည်